ဂေါက်ရိုက်ရင်း လည်ပတ်ချင်သူတွေ ရော အနားယူချင်သူတွေ ပါ အတွက် ခရီးစဉ်
Day : 1 Yangon - Hanoi (D)
ဟနွိုင်းမြို့  သို့ ညနေ (သို့) ညတွင် ရောက်ရှိကာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွန်မှ လေဆိပ်တွင် လာရောက် ကြိုဆိုပြီး ညစာ သွားရောက်သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် ကြယ် ၄ပွင့် အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်တွင် အနားယူအိပ်စက်ကြပါမည်။
Day :2Golf + Hanoi City tour (Breakfast, Lunch, Dinner)
နံနက်စောစော ထကာ ဟနွိုင်းရှိ Long Bien Golf club (or) BRG Legend Hills Golf Resort (or) Skylake Golf Resort တနေရာ တွင် ဂေါက်ရိုက်ကြကာ ပြီး လျှင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ဟနွိုင်းမြို့  အား လည်ပတ်ကြည့်ရှုကြကာ ညစာ သုံးဆောင်ပြီး လျှင် ဟိုတယ်တွင် အနားယူကြပါမည်။
Day :3Golf + Relax (Breakfast, Lunch, Dinner)
နံနက်စောစော ထကာ ဟနွိုင်းရှိ Long Bien Golf club (or) BRG Legend Hills Golf Resort (or) Skylake Golf Resort တနေရာ တွင် ဂေါက်ရိုက်ကြကာ ပြီး လျှင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် အနားယူကြကာ ညစာ ထွက် စား ပြီးလျှင် ဟနွိုင်းတွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :4Hanoi - Halong Bay (Breakfast, Lunch, Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဟာလောင်း ပင်လယ်အော်သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ ပြီး လျှင် သင်္ဘောပေါ်တွင် အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day :5Halong - Hanoi - Yangon (Brunch)
နံနက်တွင် သင်္ဘောပေါ်မှ ဟာလောင်း ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်ကြကာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်မောင်း နှင်ပြီး ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ကြပါမည်။
1. 4night accommodation in 4star hotel/Cruise with twin sharing basis
2.2weekdays golf Round
3. Green+Caddie+Buggy share fees
5. Meals as mentions
6. Transportation as in itineraries
7. Daily water